Yintoni ebonakalisiweyo xa ithelekiswa neMvume eKhanyiweyo? | Martech Zone
Yintoni ebonakalisiweyo xa ithelekiswa nemvume eKhanyiweyo?
NgeCawa, uJuni 8, 2014 NgoLwesihlanu, Februwari 12, 2016 Douglas Karr
ICanada ithatha isijwili ekuphuculeni imigaqo yayo kwi-SPAM kunye nezikhokelo ekufuneka zithotyelwe ngamashishini xa kuthunyelwa unxibelelwano nge-imeyile kunye nentsha Umthetho waseCanada Anti-SPAM (CASL). Ukusuka kwiingcali zokuhambisa endikhe ndathetha nazo, umthetho awuyiyo yonke into ecacileyo- kwaye ngokobuqu ndicinga ukuba kuyamangalisa ukuba oorhulumente belizwe baphazamise imicimbi yehlabathi. Khawufane ucinge xa ​​sifika kumakhulu ambalwa oorhulumente abohlukeneyo bebhala owabo umthetho… akunakwenzeka kwaphela.
Enye yeemeko zeCASL ngumahluko phakathi zichazwe kwaye ibhekisiwe imvume. Imvume echaziweyo yindlela yokungena apho umamkeli we-imeyile enqakraza okanye esayine khona. Imvume echaziweyo yahlukile. Ndakhe ndangena kwingxabano kunye nommeli ohambisa iinkonzo zabanikezeli ngeimeyile koku. Wayendinike ikhadi lakhe lomsebenzi kunye nedilesi ye-imeyile kuyo-kwaye ndalisebenzisa njenge ibhekisiwe imvume yokuthumela i-imeyile incwadana yam. Wakhalaza ngokuthe ngqo kumnikezeli weenkonzo zam ze-imeyile ebangela ukungathandeki. Waziva ngathi khange ayinike imvume. Ndivile ukuba yenzekile.
Wayengalunganga, kunjalo. Ngelixa umbono wakhe buqu yayiyimfuneko yemvume echaziweyo, akukho mgaqo unjalo (okwangoku). Kumthetho wase-United States 'we-CAN-SPAM, awuyidingi imvume echaziweyo okanye echaziweyo yokuthumela i-imeyile kuye nabani na… Uyacelwa ukuba ubonelele ngenkqubo yokuphuma ukuba awunabudlelane beshishini kunye nomrhumo. Kulungile… ukuba unobudlelwane beshishini, awunyanzelekanga ukuba uphume! Ngelixa oko kungummiselo, ababoneleli ngeenkonzo ze-imeyile bayithatha ngakumbi nangaphezulu ngamaqonga abo.
Libonakalisile xa lithelekiswa neMizekelo yeMvume eSetyenzisiweyo
Ngokwe-CASL, nantsi imizekelo yomahluko phakathi kokuchazwa kunye neemvume ezichaziweyo:
Imvume ebonakalisiweyo -Undwendwe kwindawo yakho luzalisa ifom yobhaliso ngenjongo yokufakwa kuluhlu lwakho. I-imeyile yokungena yokungena iyathunyelwa efuna ukuba umamkeli acofe ikhonkco ukuqinisekisa ukuba banqwenela ukubekwa kuluhlu. Oku kwaziwa njengeendlela zokungena kabini. Xa becofa ikhonkco, umhla / ixesha kunye nesitampu se-IP kufuneka zirekhodwe ngerekhodi labo lobhaliso.
Imvume echaziweyo -Undwendwe kwindawo yakho ugcwalisa ifom yobhaliso yokukhuphela iphepha elimhlophe okanye ubhalisele umsitho. Okanye umthengi ukubonelela ngedilesi ye-imeyile ngekhadi leshishini okanye xa uphuma. Abakhange banikeze mvume ngokucacileyo ukuba banqwenela ukufumana unxibelelwano lokuthengisa nge-imeyile kuwe; ke ngoko, imvume yayichaziwe - ayichazwanga. Usenokukwazi ukuthumela unxibelelwano nge-imeyile emntwini, kodwa kangangexesha elimiselweyo.
Ngelixa phantse yonke imigaqo yabanikezeli ngeimeyile ichaza ukuba kufuneka ube nayo imvume, bakunika zonke iindlela zokungenisa naluphi na uluhlu olunokubakho onokulufumana okanye uluthenge. Ke, imfihlo engcolileyo yolu shishino kukuba benza itoni yemali kubaxumi babo abathumela i-SPAM ngelixa bematsha bejikeleza ishishini bekhwaza ngokuchasene noko. Kwaye zonke i-ESP's super-duper zokuhambisa ubuchwephesha, iialgorithms, kunye nobudlelwane azinamsebenzi ne-squat… kuba abayilawuli into eyenza ukuba inbox. UMboneleli weNkonzo ye-Intanethi uyakwenza oko. Leyo yimfihlo enkulu emdaka yolu shishino.
Imvume iyichaphazela njani i-Inbox?
Libonakalisile xa lithelekiswa nemvume ebekiweyo ayinampembelelo ngqo nakwezakho ukufikelela kwi-inbox! Umboneleli ngenkonzo ye-intanethi njengoGmail akanalo nofifi xa befumana i-imeyile nokuba unayo okanye awunayo imvume yokuyithumela… ungaze uyilibale inyani yokuba ichaziwe okanye ayichazwanga. Bazakuvimba i-imeyile esekwe kwi-verbiage, idilesi ye-IP ethunyelwe kuyo, okanye inani lezinye ii-algorithms abazisebenzisayo. Ndingongeza ukuba unokulahleka kancinci ngenkcazo yakho yobuqu ibhekisiwe, unokuqhuba iingxelo zakho ze-SPAM kwaye ekugqibeleni uqalise ukuba nobunzima ekufikeleleni kwi-inbox.
Ndihlala ndisithi ukuba imboni ifuna ngokwenene ukulungisa umba nge-SPAM, emva koko yenza ii-ISPs zilawule imvume. I-Gmail, umzekelo, inokuphuhlisa API zokungena ngaphakathi BAYAZI ukuba umsebenzisi wabo ubonelele ngemvume yokufumana i-imeyile kumthengisi. Andiqinisekanga ukuba kutheni bengenzi le nto. Ndingakulungela ukubheja oko kubizwa ngokuba Imvume-esekwe ababoneleli beenkonzo ze-imeyile bayakungxola ukuba kwenzeke yonke into… baya kuphulukana nemali eninzi bethumela i-SPAM engaka.
Ukuba uthumela i-imeyile yorhwebo kwaye unqwenela ukulinganisa ukukwazi kwakho ukufikelela kwibhokisi engenayo, kuyakufuneka usebenzise inkonzo enje ngabaxhasi bethu 250ok. Zabo Inbox ulwazi ikunikezela ngoluhlu lwembewu yeedilesi ze-imeyile ukongeza kuluhlu lwakho lwe-imeyile kwaye emva koko baya kukunika ingxelo yokuba ii-imeyile zakho ziya ngqo kwifolda ye-junk okanye ziyenza kwibhokisi engenayo. Ithatha malunga nemizuzu emi-5 ukuseta. Siyisebenzisa kwi I-CircuPress apho sibona ukubekwa kwebhokisi engenayo emnandi. Inkonzo yabo iya kukwazisa nokuba inkonzo yakho idwelisiwe okanye hayi.
Imigaqo yaseCanada ithatha elinye inyathelo kwaye ubeka umda weminyaka emi-2 ekuthumeleni i-imeyile kuye nakubani na ichaze imvume. Ke, ukuba umntu onobudlelwane beshishini naye ukunika idilesi ye-imeyile, ungabathumela i-imeyile… kodwa kuphela ixesha elithile. Andiqinisekanga ukuba baya kuyinyanzelisa njani loo mithetho. Ndicinga ukuba ababoneleli beenkonzo ze-imeyile baya kudinga ukuvuselela iinkqubo zabo ukuze babandakanye uluhlu lwezinto ezingeniswa elizweni kwiimvume ezichaziweyo ezikuvumela ukuba ungeze umkhondo wophicotho xa kuthe kwakho isikhalazo. Owu, kwaye i-CASL ifuna ukuba ufumane imvume yokuvela kwabafowunelwa abakhoyo kuluhlu lwakho ngoJulayi 1, 2017 usebenzisa i Iphulo lokuqinisekisa kwakhona. Abathengisi be-imeyile baya kuthatha into eninzi kunye naloo nto!
Ulwazi oluthe kratya kwiCASL
I-Cakemail yenze umsebenzi omhle wokudibanisa isikhokelo kwi-CASL-unako download apha. Owu-kwaye ukuba unqwenela ukulawula ubhaliso lwakho ngcono, nika Unroll.me itrayi! Bagcina umkhondo kuyo yonke i-imeyile ebetha ibhokisi yakho ye-gmail kwaye bayakuvumela ukuba usonge umxholo owufunayo, okanye ungabhalisi kumxholo ongawufuniyo. I-Gmail kufuneka ibathenge!
Inqaku lokugqibela koku. Andifuni abantu bacinge ukuba ndingummeli we-SPAM. Andi… ndiyacinga Uvakalise imvumeIzicwangciso ze-imeyile ezisekwe kubonelela ngeziphumo ezizodwa zeshishini. Nangona kunjalo, ndingongeza ukuba ndiyinyani malunga noku kwaye ndibone iinkampani Khulisa uluhlu lwabo lwe-imeyile kwaye emva koko bakhulise ishishini labo ngomsindo ichaze imvume iinkqubo.
tags: cakemailugaxekile-spamKhanadaUmthetho waseCanada wokulwa ne-SPAMI-caslukuhanjiswaukuvezaUvakalise imvumeibhekisiweichaze imvumeukhethe kuPhuma kuyoumthetho wogaxekile
Umzobo woMthengi oSelfowuni
I-LinkedIn ifumana ubuqu ngokuBalisa amaBali